MODDER EWEPUTARA MBIPUTE FALLOUT 76 NA ENGINE NKE FALLOUT 4 - AKỤKỌ - 2019
Na ejiji, a na-akpọ Fallout 4-76, ndị na-egwu egwuregwu agaghị ahụ ọtụtụ n'ime ndị NPC. Kama nke ahụ, egwuregwu ahụ ga-ejupụta na ndị a na-akpọ ndị na-agbagharị agbagharị, ndị, na-eṅomi ndị ọzọ egwuregwu, ga-akparị ma gbalịa igbu onye isi. Ọbụna adrenaline n'ime ọbara nke ndị kpebiri ịnweta Fallout 4-76 ga-agbakwunye ike ịnwụ n'oge ọ bụla site na bọmbụ nukom nke gbawara na nso.
Ụgha 76 bụ egwuregwu egwuregwu dị iche iche, ebe, n'adịghị ka akụkụ ndị mbụ nke usoro isiokwu a, ọ gaghị enwe NPCs mmadụ na-achịkwa kọmputa. Site na mmadụ 24 ruo 32 ga-enwe ike igwu oge n'otu kaadị, ihe ndị bụ isi nke ọrụ ahụ ga-agụnye ike iji ngwá agha nuklia. Echere Ụgha Ụgha 76 maka Nọmba 14, 2018.